Karkootne Hibiscus waxay cabtaa cabitaannada Maine - Amjambo Africa
Waxaa qoray Ulya Aligulova
Markii Bishara alkher uu qaxooti yahay 2006 wax fikrad ah kama haynin in maalin uun uu ganacsade u noqon lahaa Karthe, oo ah cabitaan hibiste, iyada oo riyooyin ay ku gaaraan dhammaan 50-ka dowladood ee wax soo saarkiisa. Laakiin 16 sano kadib, sannado shaqo, taasi waa sax waxa dhacay. Kartkane ayaa la bilaabay horaantii bishaas waxaana horeyba loo soo iibiyay iibka qaxwaha naqshadeeye, ammadda kafeega ah ee lagu guuleysto iyo Roostey leh saddex goobood oo ku yaal Portland iyo Freeport. Alkher wuxuu rajeynayaa inuu In lagu ballaariyo tafaariiqleyaal badan, oo ay ku jiraan dukaamada raashinka, dhawaan.
Karkidene (ama Karkanji), oo macnaheedu yahay Hibiscus, waxaa loo maleynayaa inuu asal ahaan ka soo jeedo cunnada Chadian, laakiin waa cabbitaan caan ah oo ku saabsan waqooyiga iyo bartamaha Afrika iyo Jamaica. Cabbitaanku wuxuu hodan ku yahay antioxidant-ka waxaana la rumeysan yahay inuu yareeyo cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka iyo sidoo kale oggolaanshaha dheef-shiidka. Daraasadaha ayaa muujiyay in Hibiscus ay leedahay anti-bararka oo ku saabsan galo-bakteeriyada bakteeriyada bakteeriyada. Intaas waxaa sii dheer, soosaarka Hibiscus wuxuu kaloo kaa caawin karaa miisaanka oo yaraada, marka loo eego qaar ka mid ah daraasadaha qaarkood. Laakiin ugu muhiimsan, aallher Cabitaannadaas laga sameeyay Hibiscus waa macaan, oo wuxuu doonayaa dadka ku nool U.S. inay ku raaxeystaan ​​Kartadene, iyo dadka Afrikaanka ah ee dadka ka maqnaa, inay ku raaxaystaan ​​dhadhanka guriga.
“Hibiscusus waxaan ku cabineynaa guriga oo aan runtii jeclahay, oo maalin walba khamri ka sakhraansan dalka Suudaan, Chad, Masar, gaar ahaan bisha Ramadaan,\_” ayuu yiri Milkiilaha Ramadaan, \_”ayuu yiri Sankher. \_”Markaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan suuqa u tegey inaan soo arko haddii aan helo, laakiin waxa keliya oo aan arkay ayaa hubka qallalan in cabniinku ka samaysan yahay. Markaa qaar baan iibsaday oo gurigayga soo galay oo waxaan diyaarsaday khamriga. Taasi waxay ii noqotay mid yaab leh. Waxaa jira dad badan oo ka socda Afrika oo ka socda qaarada Afrika ee ku jira Mareykanka, suuqa waa mid aad u weyn welina kama heli kartid cabitaankan meel kasta. Markaa sababta Waxaan saaray suuqa?
Alkher wuxuu ku dhashay Chad wuxuuna ku qaatay caruurnimadiisii ​​Craad iyo Suudaan. Wuxuu u dhaqaaqay Baqdaad, Ciraaq, inuu ku baro daawo ka socda Jaamacadda Baqdaad laakiin waa inuu ka cararo dalka labo sano ka dib markii dagaalkii Ciraaq uu ka helay xerada qaxootiga ee ka dhacay al-HAwl xerada qaxootiga ee Waqooyiga Syria, oo u dhow Xuduudaha reer Suuriya iyo Ciraaq. Ka dib markii uu ku qaatay laba sano xerada, Alkher wuxuu awooday inuu qaxooti yahay Mareykanka qaxooti ahaan. Wuxuu marka hore degay Atlanta, Georgia, halkaas oo uu ka shaqeynayay seddex sano inuu qol yahay Shaqaalaha adeegga ee hoteelka Ritz Carlton. Sannadkii 2010, Alkher wuxuu go’aansaday inuu u guuro Lewiston la jira qoyskiisa, waana meesha uu ku noolaa ilaa iyo weligiis.
Go’aankiisa ah inuu u dhaqaaqo waxaa dhiirrigeliyay fursadaha waxbarasho ee sare ee Maine bixiya. \_”Maine waa meesha ugu wanaagsan ee iskuulka lagu aadi karo,\_” ayuu yidhi Alkher. \_”Markaad iskuulka aado, waxaad caawimaad ka heli kartaa dowladda, oo aan ahayn wax laga heli karo Georgia. Markii ugu horreysay ee aad soo gasho Mareykanka ee soogalootiga, caqabadda ugu weyn ayaa baranaya Ingiriisiga. “Markuu markii ugu horreysay yimid, ma uusan aqoon wax ingiriis ah oo ka diiwaangashan kuliyada Bartamaha Maine Maine Community sanadkii 2011 si diiradda loo saaro.Wuxuu halkaas wax ku bartay halkaas oo waqti dhiman ilaa waqti. Wuxuu rajaynayaa inuu ugu dambeyntii u wareego jaamacad ku taal Portland si uu u barto adeegyada aadanaha.
Mar haddii Alkher uu haysto fikradda ah inuu abuuro cabitaanka hibiscus, wuxuu gartay inuu gabi ahaanba wax fikrad ah ka gaabsan halka laga bilaabayo. Laakiin taasi dib uma uu qaban. Wuxuu bilaabay baadhitaan, oo uu helay wax-qabadyo Davison, oo ah shirkad ku saleysan Pittsburgh oo ka caawiya dadka ka soo horjeedda adduunka oo dhagarta ah ayaa soo bandhigaya wax qabadkooda. Adeegyada waxaa ka mid ah cilmi-baarista badeecada / patterka, horumarka tusaalaha, naqshada baakadaha, iyo wakiilka shatiga leh. Waxay kaloo ka caawiyaan macaamiisha inay fikradahooda u soo bandhigaan shirkadaha shirkadaha, soosaarayaasha, iyo tafaariiqda shatiga macquulka ah.
“Waan siiyey fikradeyda waxayna baarayeen in qof kale oo uu qof kale ku nool yahay 20-kii sano ee la soo dhaafay uu lahaa isku fikir. Dami cidna ma leh. Waxa kaliya ee jira waa shaah Hibcus, laakiin ma ahan casiirka Hibicus. Marka waxaan u diray iyaga oo la soo diray iyo wax soo saarka dhammeeyay, oo waxay la yimaadeen dhalada iyo naqshadaynta baakadaha, iyo sidoo kale fiidiyow xayeysiin ah, “ayuu yidhi asther.
Tallaabada xigta ee soo socota waxay ahayd shati shati, maadaama alaabada guryaha lagu sameeyo si toos ah loogu iibin karo macaamiisha mid aan mid lahayn, iyadoo loo eegayo sharciga cuntada ee Maine. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu go’aansaday inuu tuso fiidiyowga xayeysiinta ee Karkide inuu ka mid noqdo mid ka mid ah aqoonyahannadiisa ku yaal kulliyadda bulshada ee Bartamaha Maine Maine. Waxay isku dayeysay cabitaanka waxayna jeclaatay wax badan oo ay walaalkeed ku tidhi walaalkeed. Waa madaxweynaha waxsoosaarka wax soo saarka ee ku saleysan Auburn-, shirkadaha waxsoosaarka ah.
“Aad ayaan u nasiib badnaa in aan helo, oo iyaga in aan ku heshiiyo laysanka Karkide, maxaa yeelay waxay sameeyeen dhammaan imtixaannada iyo wax soo saarka, mana aha inaan iska bixino mid ka mid ah, ” ayuu yidhi Akerher. Wuxuu la saxeexday shirkadda, wuxuuna ogolaaday inuu la wadaago 45% macaashka. Strainrite waxay cabtay cabitaankooda shaybariyaasheeda California, halkaas oo ay ku soo baxaan baaritaanada oo ay ka baxaan kariska. “Tani waxa ay dhaceen sanadkii 2019.
Dhamaadka sanadka, waxaan dib ugu laabanayaa booqashada Afrika dhowr bilood, nasiibdarrona waxaan jabsaday halkaan joogay oo aan soo laaban karin ilaa dhamaadka oo ah 2020.”
PreviousKhayaanada naxdinta leh
NextKahadalida cudurada galmada lagu kala qaado inkasta oo dhaleeceyn